Linear igbapu, ịsa igbapu, Ft igbapu, naa Mirror Cabinet - Fenghua
360 Celsius Plastic siphon
Kpọọrọ ìgwè ịsa oche
Arụ ọrụ Kemgbe 1998
Ningbo Fenghua Aootan Sanitary Ware Co. Ltd bụ ipuiche amị ịsa uzo na ịsa ngwa na ahụmahụ n'elu 8 afọ. Anyị kweere na anyị nwere otu n'ime ihe ndị kasị elu-edu, na-wuru na mbara-sitere selections nke ụlọ ịwụ ngwa niile nke Aootan ụwa. Ọ bụ ezigbo nhọrọ maka oge a obibi mma, hotels na azụmahịa ụlọ.
Anyị bụ ndị nsọpụrụ na-anabata na-emepụta OEM / ODM ọrụ na ngwaahịa na elu àgwà na asọmpi price na ngwa ngwa nnyefe. Aootan dị njikere na-egwu a na-enye aka ọrụ na azụmahịa gị. Kpọtụrụ anyị chọta otú anyị raara onwe anyị ahịa afọ ojuju ga-enyere gị aka imeta ndị nsonaazụ kacha mma na àgwà na profitability.
Vetikal tinyekwa E
Wall igbapu W2
Wall igbapu W1
Square igbapu S1-02
Square igbapu S4-03
Vetikal tinyekwa V-17
Side tinyekwa H
Nkuku igbapu L-01
Anyị na Tụkwasịrị Obi
Adress: No.21 Shewang Ind. Park, Chunhu Town, Fenghua Ningbo China
Ekwentị: + 86-574-88744900